Ismaaciil Mire- Ragow kibirka waa lagu kufaa kaa ha la ogaado – dhugasho
haddisabdi Nofeembar 11, 2016 suugaanta
Nin la odhan jiray Carab Dheere oo kibir tadhahay, Goboladda Waqooyi wax Alla wixii uu doono ka sameeyay Ingiriiskuna baardaajinayey, ayaa waxaa la wariyey in wiil u yimid oo weydiistay gabadh ay walaalo ahaayeen. Carab ayaa weydiiyey wiilkii oo “maxaad ku falaysaa gabadha?” Waan guursanhayaa ayuu wiilkii ku jawaabay. Carab ayaa asgartiisii faray inay wiilkii toogtaan. Sidii bay yeeleen oo wiilkii rasaas huwiyeen halkaana qudha uga qaadeen.
Niman odayaal ah oo gardarada ninka miskiinka ah loo toogay la yaaban ayaa Carab Dheere weydiiyey sababta uu wiilka u toogtay wuxuuna ku jawaabay: ninka anigoo Carab Dheere ah, oo maanta jooga, wixii aan doonana samayn kara, il-adaygiisa intuu ii yimid walaashaa aan guursado ee isii yidhi, barrina anigoo igu odhan doonaa aan “————“ Intaa ayuu wiilku qoonsaday ayuu odayaashii ugu jawaabay. Wax la filayey dhaqanka Soomaaliyeedna lug ku leh ma aha, Carabse wuxuu ahaa nin asiib wado. Odayaashii af-kala qaad iyo amakaag ayey kala soo tageen goobtii.
Jamal Musse	 on Nofeembar 12, 2016 at 3:52 b
Waa gabay qiima leh
Cabdinaasir	 on Nofeembar 13, 2016 at 10:32 b
Gabaygu ma dhamaystirna
mohamud qudka	 on Nofeembar 14, 2016 at 4:20 b
waa murti qayma badan gabaygan ismaail mire tiriyey
Arawelo	 on Nofeembar 23, 2016 at 10:48 g